ချစ်သူတွေ၊လင်မယားတွေအများစုကချစ်လျက်နဲ.ခဏခဏရန်ဖြစ်ကြ စကားများကြနဲ.ဖြစ်တတ်ကြတာ ထုံးစံပဲနော်။ တခါတလေ တချို.သူတွေကဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်နဲ.ပြောတတ်ကြတယ်။ တကယ်တမ်းလဲပြတ်နိုင်ကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ.။ ဘာလို.့ မုန်းစရာကောင်းအောင်လုပ်တတ်ကြတာလဲမသိဘူးနော်။ သူတစ်ခွန်းငါတစ်ခွန်းပြန်ပြောနေမယ့်အစား အဲ့လိုအချိန်မျိုးဆို ထိပ်တိုက်မတွေ.တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ သူရဲ.ကောင်းကြောင်းတွေ၊သူကိုယ့်ပေါ်ဘယ်လိုကောင်းခဲ့ တာတွေပဲစဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင် သူ.အပေါ်ဖြစ်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ.ဒေါသတွေလည်း ပျောက်သွားမှာ ပေါ့နော်။ဒီနည်းလမ်းကချစ်သူအချင်းချင်း လင်မယားစုံတွဲအချင်းချင်းမှာမှမဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿသနာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မေတ္တာနဲ.
အရာရာကိုအောင်မြင်နိုင်ပါစေ။ ချစ်သူအချင်းချင်းမိတ်ဆွေအချင်းချင်း မိသားစုအချင်းအချင်း ပြေလည်နိုင်ကြပါစေ။
Posted by JACBA at 10:12 PM